သင်၏ Blog ကို "A-List" သို့ရယူခြင်း | Martech Zone
သင်၏ Blog ကို“ A-List” သို့ရယူခြင်း
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 17, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
အိုကေအခုမင်းကိုဒီမှာရှိနေပြီဆိုရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့၊ မထားခဲ့ပါနဲ့ ငါပြောသမျှကိုနားထောင်ကြလော့။
Nicholas Carr ၏ Blog posting တွင် blogosphere သည်မီးတောက်လောင်နေသည်။ The Unread. Israelသရေလအမျိုး၊ အခြားဘလော့ဂါများတစ်ချက်ကဲ့သို့ (အငြင်းပွားမှုတွင်)နမူနာ).
ငါပြောချင်တာကိုမဖတ်ခင် Mr. Carr ၏အပြည့်အ ၀ စာကိုဖတ်သင့်သည်။ သူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုမျှမျှတတဆက်သွယ်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ သူပြောနေတာကအရမ်းကောင်းတဲ့“ A-List” ဘလော့ဂါတွေသိပ်မများလှတဲ့အတွက်တခြားသူတွေကသာသုတ်ပဝါကိုပစ်ချသင့်တယ်။
သင် blogosphere ၏“ A-List” ကိုရယူလိုလျှင်၊ ထိုစာရင်းသည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုအရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ရန်လိုသည်။ နင် Carr မဟုတ်၊ Technorati မဟုတ်၊ Google၊ Yahoo! မဟုတ် Typepad နဲ့ WordPress မဟုတ်ပါ။ “ A-List” သည်သင်ရရှိသောထိခိုက်မှုအရေအတွက်၊ စာမျက်နှာမြင်ကွင်းပမာဏ၊ သင်ရရှိသောဆုများသို့မဟုတ်သင်၏ adsense အကောင့်ရှိဒေါ်လာပမာဏပေါ် မူတည်၍ မဆုံးဖြတ်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်သင်မှားယွင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဘလော့ဂ်လုပ်ကောင်းလုပ်လိမ့်မည်။
The Great Unread တစ်ခုမှ Douglaskarr.com မှကြိုဆိုပါသည်။ (အိုကေကောင်းကောင်းမကောင်းဘူး)
ပြissueနာမှာမီဒီယာကြော်ငြာများ၏ကျောင်းဟောင်း 'ဖြစ်သည်။ ထိုစည်းမျဉ်းကသင်၏ကြော်ငြာကိုမျက်လုံးများပိုမိုတွေ့လေလေ၊ အကယ်၍ သင်ထောင်ချီသောစာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုခြင်းများကိုရရှိပါကအောင်မြင်မှုသည်သင်ကျောင်းဟောင်းတွင်ဖော်ပြသည် စုံတွဲတစ်တွဲရာသင်တစ် ဦး ပျက်ကွက်ဖြစ်ရပါမည်။ သင်ဟာမဖတ်ရသေးတဲ့လူကြီးမင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းပါ။ ဒါဟာရုပ်ရှင်ရုံ၊ သတင်းစာလုပ်ငန်းနဲ့ကွန်ရက်ရုပ်မြင်သံကြားတွေကိုဆွဲချနေသလိုပါပဲ။ ပြနာကသင်မျက်လုံးများကိုအကုန်အကျများပေးပြီးပြန်ပေးစရာမလိုပါ။ ပြနာကသင်အဲဒီမျက်လုံးအားလုံးအတွက်မလိုအပ်ပဲ၊ သင့်ကြော်ငြာကိုမှန်မှန်ကန်တဲ့မျက်လုံးတွေဆီရောက်ဖို့ပဲလိုတယ်။
ကျွန်ုပ်၏“ A-List” သည် Seth Godin၊ Tom Peter's၊ Technorati's, Shel Israel သို့မဟုတ် Nick Carr's နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ငါစာဖတ်သူတစ်သန်းလိုချင်တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကဆက်ပြီးကြီးထွားလာတဲ့အခါငါစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်မှာစာဖတ်သူတွေကိုစာဖတ်သူကိုထိန်းထားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာတူညီတဲ့ပြproblemsနာတွေရှိပြီးငါနဲ့တူတဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုရှာဖွေနေတဲ့ရှေးရှေးတွေကိုသာတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။
ငါဟာအင်ဒီယားနားမှာနေတဲ့ဒီအမည်ခံစျေးကွက်ရှာဖွေရေး - နည်းပညာ - geek - Christian - ဖခင်ပဲ။ နယူးယောက်ဒါမှမဟုတ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုကျွန်တော်မသွားဘူး။ ငါချမ်းသာဖို့ရှာနေတာမဟုတ်ဘူး (ငါလုပ်ရင်တော့ညည်းညူမှာမဟုတ်ဘူး) ။ ငါ Indianapolis နှင့်အနီးတဝိုက်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာပညာရှင်များအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်နေသည်။ ငါ blogging ကို 'ငါ၏' ထု (အားလုံးစုံတွဲတစ်ဒါဇင်သို့မဟုတ်ဒီတော့!) မှဖော်ထုတ်မယ်။ ပြီးတော့ငါဟာငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ ငါ့ရဲ့အတွေးတွေ၊ ငါ့မေးခွန်းတွေနဲ့ငါ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစိတ် ၀ င်စားသူများစွာနဲ့မျှဝေနေတယ်။
ငါ Shel Israel, Tom Morris, Pat Coyle, ငါ့မိသားစု, သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ငါနှင့်အတူမျှဝေသောအခြားလူများထံမှမှတ်ချက်တစ်ခုရသောအခါငါတွေ့မြင်သည်။ ငါ "A-List" သို့ဝင်ရောက်ပြီးပြီ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏ A-List မပါလျှင်၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းငါသင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်ချင်ကြဘူး။ ကျနော်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကွဲပြားခြားနားအောင်မြင်မှုရိပ်မိ။
NSA Snooping ကတရားသူကြီးအားရပ်လိုက်သည်
Microsoft စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါဟာ Rat အနံ့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်
သြဂုတ်လ 17 ရက် 2006 ခုနှစ် 10:09 နာရီ
ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို တိုင်းတာဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါကိုရောက်တာနဲ့ နောက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဆီ ဆက်သွားပါ။
သြဂုတ်လ 17 ရက် 2006 ခုနှစ် 10:40 နာရီ
သွားရမည့်လမ်း - လုံးဝသဘောတူသည်။
ဤစာရင်းဝင်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အတွေးအနည်းငယ် တီထွင်ခဲ့သည်။
"တစ်ပိုင်း-စျေးကွက်ရှာဖွေရေး-နည်းပညာ-geek-ခရစ်ယာန်-ဖေဖေ" bit အတွက် ဂုဏ်ယူစရာကြီးပါ။ ငါ့ကိုယ်ငါလည်း ဒီလိုပဲ ပုံဖော်လို့ရတယ်။
သြဂုတ် 18, 2006 မှာ 3: 52 AM
ကောင်းမွန်သောမှတ်ချက်နှင့် grwat ပို့စ်။ လင့်ပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပါ။
သြဂုတ် 18, 2006 မှာ 6: 34 AM
ယေရှုသည် လူထောင်ပေါင်းများစွာအား တရားဟောသော်လည်း လေ့ကျင့်ပေးသူ ၁၂ ဦးသာ ရှိသည်ကို သတိရပါ။ တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးသောသူတို့သည် သစ္စာရှိကြ၏။ ဘယ်သွားလဲကြည့်!!